Global Voices teny Malagasy » Tontolo Arabo Manohitra Ny “Fandripahana ao Gaza” · Global Voices teny Malagasy » Print
Tontolo Arabo Manohitra Ny “Fandripahana ao Gaza”
Voadika ny 13 Avrily 2018 3:17 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Israely, Jordania, Palestina, Syria, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, gazety, Mediam-bahoaka, Vonjy Voina, Zon'olombelona
(Marihana fa efa tamin'ny volana Desambra taona 2008 ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Mitaraina noho ny manjò ny vahoaka ao Gaza ny olona manerana ny tontolo Arabo taorian'ny fanafihana marobe nataon'i Israely, izay nahafatesana Palestiniana 200 mahery sy naharatrana 700 mahery.
Niteraka fahatezerana indrindra ny fahanginan'ny governemanta Arabo
Ayhamjzzan  avy ao Syria nanoratra amin'ny teny arabo hoe:
Zaza amam-behivavy ny antsasak'ireo maritiora 200. Baomba milanja 100 taonina avy aminà fiaramanidina 100 no napoaka. Aiza ny Arabo? Ady amin'ny Hamas sa fandripahana ny mponina ao Gaza izany? Aiza ny fahamendrehan'ny Arabo ary nahoana isika no mijoro mitazam-potsiny tahaka ireo fitondrana Arabo tsy misy dikany izay vonona fotsiny ny hanameloka.
Mbola any Syria ihany, nilaza i Qunfuz  fa mora fantatra mialoha ny vono olona. Nanampy ity bilaogera ity hoe:
Heloka bevava fanahy iniana, feno habibiana nomanina ity. Ary tsy misy mahatsikaritra.
Androany maraina, any am-pianarana ny ankizy, eny an-dalambe sy any amin'ny birao ny olona, any amin'ny lanonana fanomezana mari-boninahitra ny polisy, nikiakiaka sy nitabataba ny lanitra. Misy ny tatitra fikoropahana ankapobeny, ary feno faty ny lalana.
Fantatro fa lasa fitarainana ny lahatsoratra rehefa maneho ireo fihetseham-po tsotra ireo: saingy; sario indray hoe velona ianao, na maty, miaraka amin'ny zanakao, amin'ny toerana toy izany. Ary eritrereto hoe tsy miraharaha anao izao tontolo izao.
Jordaniana Mohammed Badi nandefa ity sary ity ary nanoratra hoe:
Gaza …..Aza Mitomany, Miaraka aminareo izahay. Gaza
Label Ash [fr], Maraokana avy any Barcelona, mitebiteby noho ny fahatsapana zava-doza::
Milaza ny Ligy Arabo fa hisy fivoriana hatao amin'ny Alatsinainy mba hanoherana ny fanafihana Israeliana.
Mba manana fahaizana mivazivazy ry zareo. Hanameloka fotsiny ny fanafihana amin'ny resaka tsy mamokatra ireo. Misy zavatra azontsika atao ve? Tsia.
Miala tsiny amin'ny fahasiahan'izany teny izany, saingy tsy ilaina intsony izany. Maty i Palestina, tsikelikely, fa maty.
“Miantso an'izao tontolo izao i Palestina, saingy tsy mety tratra antso” (Amazigh Yacine)
Tezitra tamin'ny fihetsiky ny Arabo sy ny iraisam-pirenena amin'ny fijalian'ny Palestiniana ihany koa ilay Jordaniana SimSim . Nilaza ity bilaogera ity fa isaky ny mitranga ny loza tahaka izany, dia toa miverina ho azy ny tantara – ary mitovy hatrany ny fihetsika sy ny fanambaràna.
Nanamarika i SimSim tamin'ny fanehoan-kevitr'ireo governemanta Arabo hoe:
Miantso fihaonambe Arabo maika ny firenena Arabo izay efa fantatra mialoha ny fanapahan-kevitra goavana horaisina. Hangataka famelan-keloka avy amin'ireo Siônista izy ireo ary hangataka azy ireo mba hampiato ny famonoana sivily na raha tsy izany, ho tezitra amin'izy ireo isika.
Ary mazava ho azy, tsy handray andraikitra izy ireo raha tsy mifarana ny hetsika miaramila satria sahirana amin'ny fankalazana sy ny fety ofisialy ry zareo.
Mampifantoka ny sainy amin'ny sehatra iraisam-pirenena, nilaza ilay bilaogera:
Milalao toy izany daholo ny firenena rehetra: Raha namerina ny fitaovam-piadiany i Hamas, dia tsy nanafika i Isiraely.
Rahoviana no hijanona i Israely? Ankehitriny manafika ao anatin'ny fankatoavan'ny Arabo adala izy, amin'ny fialan-tsiny fa hampiray ny laharantsika sy hametraka governemanta tokana ho an'i Palestina, mazava ho azy.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny (Trano Mainty), izay niantso an'i Isiraely mba hifantoka amin'ny fanafihany lavitra ny sivily. Izany no antsoiko hoe fangorahana.
Nanasokajy ny vahoaka Arabo tahaka izao ihany koa i SimSim:
Tsy afaka manao na inona amin'ny toe-javatra ny fangorahana…sy ny fo vaky….halahelo…hanaraka fantsom-baovao…..hitomany……ary avy eo!!! Efa miha-akaiky ny Faran'ny taona ary ho ampy hanamaivanana ny adiady eo amin-dry zareo izany.
Azo jerena ao amin'ny On Olives and Sake ny famaranana amin'ity fitantarana ity, izay nandefasan'i Yazan Badran, bilaogera Syriana lohateny toy izao :
Tratry ny Taom-baovao Mihoso-drà
Raha hijery ireo fanehoan-kevitra maro hafa, araho hatrany ny Global Voices.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/13/117653/
 nahafatesana : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5404501.ece
 On Olives and Sake : http://yazanbadran.com/blog/2008/12/happy-bloody-new-year/